Bilaogy Tiorka- Vaovao Vitsivitsy · Global Voices teny Malagasy
Bilaogy Tiorka- Vaovao Vitsivitsy
Voadika ny 09 Desambra 2017 3:14 GMT
Tsy dia noresahana firy tao amin'ny Global Voices i Torkia sy ny bilaogy Tiorka. Tsy maintsy milaza aho fa nandritra ny fotoana fohy, teo ambanin'ny fahatsapana aho fa tsy nisy bilaogy Tiorka mihitsy tao amin'ny ” wild world wide web” …. saingy diso aho … tena diso tokoa. Raha ny marina, tao amin'ny tranonkala mitondra ny lohateny hoe Blog Kardesligi (Tiorka), midika ara-bakiteny hoe “ny firahalahian'ny blaogy”, bilaogy Tiorka mahery ny 700 no voatanisa amin'izao fotoana izao; Mazava fa tsy lisitra feno momba ireo bilaogy Tiorka rehetra misy ilay lisitra, fa solontenan'ny bilaogera marobe miandry ny horenesina fotsiny. Ny ankamaroan'ireo blaogy voatanisa ao amin'ny Blog Kardesligi dia nosoratana tamin'ny teny Tiorka, saingy misy ihany koa ny fitomboan'isan'ireo bilaogy amin'ny teny Anglisy. Ny tanjon'ity vaovao isan-kerinandro ity dia manome anao topi-maso momba ireo bilaogy amin'ny teny Tiorka.
Ity ny topi-maso momba ny tontolon'ny bilaogy Tiorka … na izany aza, piti-drano miohatra amin'ny ranomasimbe ihany izy ireo….
Ireo lohahevitra roa niseho tao amin'ny bilaogy Tiorka dia ny Firesahana vao haingana ho mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana sy ny fiandohan'ny Ramadany. Niezaka niditra tao amin'ny Vondrona Eoropena nandritra ny folo taona mahery i Torkia ary nanao fanovana marobe tao amin'ny fehezan-dalànany mba hanombohana ny fifanakalozan-kevitra miaraka amin'ny Vondrona Eoropeana. Tamin'ny 4 Oktobra, nambara fa hiditra amin'ny fifampiraharahana ofisialy amin'ny Vondrona Eoropeana i Tiorkia. Ho an'ny maro, efa ela ny niandrasana ity fanambarana ity, na zany aza, efa fantatra fa haharitra 10 taona farafahakeliny vao ho tanteraka ny maha-mpikambana an'i Tiorkia ao amin'ny Vondrona. Murt Ulas avy amin'ny Metroblogging: Istanbul maminavina fa tsy dia hisy fiantraikany firy ao amin'ireo tanàna lehibe tahaka an'i Istanbul ny maha-mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana. Tahaka ny ao anatin'ny tontolo Miozolomana, lanonana mahafaly ny fiandohan'ny Ramadany. Idil avy ao amin'ny Ignore Me If You Can nandefa fiarahabana Ramadany ho an'ny rehetra. Nanambara ihany koa i Metroblogging: Istanbul fa misy ny sakafom-piarahamonina Iftar nozaraina tao amin'ny Distrikan'i Uskadar ao Istanbul..
Raha mahaliana anao ny resaka nahandro, ity misy bilaogy mahafinaritra antsoina hoe Yogurt Land izay mamoaka ireo karazan-tsakafo amin'ny teny Anglisy sy Tiorka, mampilendalenda tsotra izao ny sary miaraka amin'izany.